आइसीयू सेवा शुरु नहुँदासम्म रिफर रोकिदैन – Janaubhar
आइसीयू सेवा शुरु नहुँदासम्म रिफर रोकिदैन
प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २१, २०७१ | 248 Views ||
डा. विकास देवकोटा मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट,
राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही, दाङ
राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. विकास देवकोटा अस्पतालमा आइसीयू सेवा शुरु नहुँदासम्म रिफर नरोकिने बताउनुहुन्छ । विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरहरुको अभावमा अस्पतालले स्तरअनुसारको सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको उहाँको भनाई छ । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको सेवा, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, समस्या लगायतका विषयमा देवकोटासँग गरिएको कुराकानी । –सम्पादक
राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पालको स्तरवृद्धि भयो भन्ने सुनिन्छ । कस्तो स्तरवृद्धि भएको हो ?
गत साउनदेखि लागू हुने गरी सरकारले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरवृद्धि गरेको छ । यसअघि ५० वेडको मात्र रहेको अस्पताल अब एक सय वेड सञ्चालन भइरहेको छ । यसका साथै अस्पतालले विभिन्न सेवासमेत थप गरेको छ । अहिले हामीले इण्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे, कानको अप्रेशन, जण्डिस भएका बच्चाहरुको लागि फोटो थेरापी सेवा थप गरेका छौं ।
त्यसैगरी एचआइभी संक्रमितहरुका लागि सीडीफोर सेवा उपलब्ध गराइएको छ । अस्पतालले व्यवस्थापनतर्फ पनि धेरै सुधारको प्रयास गरेको छ । डाक्टर तथा कर्मचारीहरुका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणालीको व्यवस्था गरेका छौं । यसअघि डाक्टरहरु समयसम्म बस्दैनन् भनेर गुनासो आउने गर्दथ्यो । विद्युतीय हाजिरी प्रणालीले त्यो समस्याको समाधान गर्नेछ ।
सरसफाइतर्फ पनि अस्पतालले विशेष ध्यान दिएको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरसफाई २४ घण्टा गर्न जरुरी छ । हामीले अहिले ठेक्का प्रणालीमार्फत् फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएका छौं । अन्य ठूला–ठूला अस्पतालमा सफल भइसकेकाले यो अभ्यासबाट पनि हामीले सफल पाउने छौं भन्ने अपेक्षा लिएका छौं । मानव जीवनका लागि वातावरण महत्वपूर्ण कुरा हो । स्वच्छ वातावारण भएन भने निरोगी मान्छे पनि रोगी बन्छन् । अस्पतालमा आएका रोगी बिरामीहरुलाई र उनका कुरुवाहरुलाई झन् बढी हरियालीको आवश्यकता छ । त्यही भएर हामीले अस्पतालमा हरियाली कायम गर्ने सोच बनाएका छौं । वृक्षारोपणमार्फत् अस्पताल परिसरमा हरियाली काम गर्न थालिएको छ ।
त्यसैगरी हरेक क्षेत्रमा संवादको आवश्यकता छ । अस्पतालमा कम संवाद हुने गरेको यसअघि पनि गुनासो आउने गरेको थियो । हामीलाई पनि काम गर्न त्यति सजिलो भएको थिएन । त्यसैले अब नियमित अस्पतालका डाक्टर तथा कर्मचारीहरुसँग अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ ।
डाक्टर तथा कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ नि ?
स्तरवृद्धि हुनुभन्दा पहिले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा ७२ जना डाक्टर तथा कर्मचारीको दरबन्दी थियो । अहिले त्यो बढेर १ सय १९ जना पुगेको छ । समिति तथा करार गरेर ३५ जना थप कर्मचारी हुनुहुन्छ । विशेषज्ञ डाक्टर मात्र १७ जनाको दरबन्दी पुगेको छ । अहिले ९ जना विशेषज्ञको दरबन्दी पूर्ति भइसकेको छ । अहिले पनि हामीलाई न्यूरो, मुटु र मानसिक रोगको दरबन्दी खाली हुँदा समस्या भएको छ । यी दरबन्दी पूरा गर्न सकेको खण्डमा अस्पतालले अहिले भएको रिफरलाई आधाभन्दा बढी घटाउन सक्दथ्यो ।
मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने जिल्ला दाङ हो । मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट घाइते भएकाहरु धेरैको टाउकोसम्बन्धी समस्या हुन्छ । उनीहरु धेरै अहिले रिफर भइरहेका छन् । अस्पतालमा न्यूरो डाक्टर उपलब्ध भएमा यही उपचार गर्न सम्भव थियो ।
त्यसैगरी मानसिक रोग विशेषज्ञ पनि तत्काल आवश्यक छ । कुल जनसंख्याको करीब १० प्रतिशत मान्छेमा कुनै न कुनै रुपले मानसिक समस्या हुन्छ भनेर तथ्यांकले बताएको छ । दाङमा पनि मानसिक समस्या धेरैमा आएको हुन्छ । विभिन्न घरेलु तथा लैंगिक हिंसामा परेकाहरुमा मानसिक समस्या हुन्छ । मानसिक रोग विशेषज्ञको अभावमा हामीले उनीहरुको उपचार गर्न सकेका छैनौं । अहिले मुटु सम्बन्धी दुई जना जनरल फिजिसियन हुनुहुन्छ । उहाँहरुले अहिले अस्पतालमा सेवा उपलब्ध गराइरहनुभएको छ । दिनप्रतिदिन मुटु रोगीहरु बढिरहेकाले अस्पतालमा तत्काल मुटुरोग विशेषज्ञ ल्याउन आवश्यक छ ।
अस्पताल परिसरमा नै करीब ४ करोड लागतमा ठूलो भवन निर्माण भइसकेको छ । गत वर्ष नै हस्तान्तरण भइसकेकाले हामीले प्रयोग शुरु गरिसकेका छौं । अहिले तल्लो तला प्रयोग भइसकेको छ । अब माथिल्लो तलामा पनि प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
त्यसैगरी अस्पतालले कुपोषित बालबालिका तथा उनको आमाको स्वाथ्य सुधारका लागि कुपोषण गृह स्थापना गरेका छौं । कुपोषण गृह बच्चाको उपचार तथा उसको स्याहार सुधार गरिन्छ । कुपोषण गृहमा हामीले सन्तुलित पौष्टिक खाना, रोगको उपचार, आमालाई सन्तुलित भोजनबारे जानकारी दिन्छौं । यी सम्पूर्ण सेवा पूर्णरुपमा निःशुल्क भइरहेको छ । पाँच वर्षमुनिका बच्चा तथा उनका आमाले यहाँबाट सेवा पाउँछन् । घरेलु विधिबाट बच्चाको सन्तुलित आहार खुवाइने भएकाले यसमा धेरै खर्च त लाग्दैन् । अहिले कुपोषण गृहमा १० वटा वेड रहेका छन् । कुपोषण गृहमा एक महिनासम्म आवासीय उपचार गरिन्छ । हामीले आमालाई सन्तुलित खानाको विषयमा जानकारी दिने भएकाले घरमा गइसकेपछि पनि राम्रोसँग ख्याल गर्छन् । यसले गर्दा उनका परिवारका अन्य सदस्यले पनि सिक्न पाउँछन् । यदि पहिलो बच्चा हो भने दोस्रो बच्चा जन्मदा यस्तो समस्या हुँदैन ।
नयाँ सेवाको वारेमा त धेरै भन्नुभयो तर, अस्पतालले साधन स्रोत अनुसार पनि सेवा दिन सकेको छैन भनिन्छ त ?
तपाईले भन्नुभएको गुनासो केही हदसम्म सही पनि होला तर यसमा विभिन्न कुराले प्रभाव पारेको छ । जनचेतनाको स्तर बढ्नु, नयाँ–नयाँ रोगहरु आउँदै गर्नु, स्वास्थ्य सेवाको स्तरवृद्धि हुनुलगायतका कारणले गर्दा उपक्षेत्रीय अस्पतालले आफ्नो सेवा स्तरअनुसारको सेवा दिन नसकेको हो । विगतभन्दा त धेरै सेवा बढेको छ । अहिले हामीले प्रसुति, गाइने, अर्थो, नाक कान घाँटी र सर्जरीको अप्रेशन भइरहेको छ । अहिले दैनिक तीन सय बढीले सेवा पाइरहेका छन् । केही मान्छेहरुले अस्पतालले केही सेवा गरेन भनेर नकरात्मक हल्ला बढी फैलाउँछन् । अस्पताललाई गुणस्तर बनाउन हामी सबैको दायित्व हो । यसमा यस क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरुको भूमिका रहन्छ । अस्पतालले जतिसक्दो आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ ।
अस्पतालले स्तरअनुसारको सेवा दिन सकेको छैन भनेर आफै भन्नुहुन्छ । किन दिन सक्नुभएन त ?
यसको मुख्य समस्या भनेको हामीसँग आइसीयू सेवा छैन । आइसीयू सेवा नहुँदा जटिल प्रकारका केसहरु रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ । आइसीयू सेवा उपलब्ध नहुँदा हामीलाई पनि पूर्ण विश्वास हुँदैन । जटिल हुन सक्ने बिरामीहरुलाई हामीले अलि चाँडो रिफर गर्छौं । यसले गर्दा धेरै गुनासो पनि आएको छ । यो हो हाम्रो बाध्यता हो । आइसीयू सेवा शुरु भइसकेपछि अस्पतालले बिरामीको रिफर धेरै गर्दैन । यसले गर्दा हामीले जटिल खालका बिरामीहरुलाई पनि सजिलैसँग सेवा उपलब्ध गराएका छौं । हुन त हामीले सरकारसँग आइसीयू सेवाका लागि पहल गरेका छौं । उपक्षेत्रीय अस्पतालमा आइसीयू सेवा आवश्यक छ । नेपालमा अन्य अञ्चल अस्पतालले आइसीयू सेवा शुरु गरिसकेका छन् । यही कारणले गर्दा उपक्षेत्रीय अस्पतालले अञ्चल अस्पतालमा बिरामी रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
Prevसोख फोटोग्राफी | संकल्प श्रेष्ठ
Nextसाहित्य, पक्षधरता र आजको पुस्ता